Maal - Shineon Technology Co., Ltd.
GSR Ventures waa sanduuq maalgashi maalgashi oo maalgeliya ugu horreyn shirkadaha tikniyoolajiyadda marxaladda hore iyo koritaanka oo howlo wax ku ool ah ka wada Shiinaha. GSR hadda waxay leedahay qiyaastii $ 1 bilyan oo maamul ah, Meelaha ugu muhiimsan ee diiradda la saarayo waxaa ka mid ah semiconductor, Internet, wireless, warbaahinta cusub iyo tikniyoolajiyadda cagaaran.
Northern Light Venture Capital (NLVC) waa shirkad hormuud u ah shirkadaha maalgashiga Shiinaha ee bartilmaameedsanaya fursadaha marxaladda hore iyo koritaanka. NLVC waxay maamushaa qiyaastii US $ 1 bilyan oo raasumaal ah oo leh 3 US $ maal iyo 3 RMB. Shirkadaheeda faylalka waxay ku fidsan yihiin TMT, Teknolojiyad nadiif ah, Daryeel Caafimaad, Waxsoosaar heer sare ah, Macaamiil iyo wixii la mid ah.
IDG Capital Partners waxay ugu horeyn diirada saareysaa maalgashiga mashaariicda laxiriira Shiinaha ee VC & PE. Waxaan ugu horreyn diirada saareynaa shirkadaha hogaaminaya badeecooyinka macaamiisha, adeegyada xayeysiinta, internetka iyo codsiyada wireless, warbaahinta cusub, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, tamarta cusub, iyo qeybaha wax soosaarka horumarsan. Waxaan maalgelin ku sameynaa dhammaan heerarka nolosha ee shirkadda laga bilaabo marxaladda hore illaa pre-IPO. Maalgashigayagu wuxuu u dhexeeyaa US $ 1M ilaa US $ 100M.
Mayfield Found waa mid ka mid ah shirkadaha ugu sarreeya maalgashiga adduunka, Mayfield waxay leedahay $ 2.7 bilyan oo maamul ah, iyo in ka badan taariikhda 42-sano. Waxay maalgashatay in kabadan 500 shirkadood, taasoo dhalisay in kabadan 100 IPOs iyo in kabadan 100 iskuxirid iyo helitaan. Qaybaha maalgashiga ee muhiimka ah waxaa ka mid ah Enterprise, Consumer, Energy Tech, Telecom iyo Semiconductors.